Fri, Jun 5, 2020 at 3:26am
जुम्लामा क्वारेन्टाइनमा बसेका १ वृद्धको मृत्यु, मृतकको स्वाब संकलन #आहा खबर# रुकुम घटनामा संलग्न थप ७ जना पक्राउ #आहा खबर# निजी विद्यालयले असार १ देखि नयाँ भर्ना सुरू गर्ने #आहा खबर# विदेशबाट फर्किनेले हवाई भाडा आफै तिर्नुपर्ने #आहा खबर# क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किएपछि मृत्यु भएका सुर्खेतका युवककाे रिर्पाेट पोजिटिभ #आहा खबर# बैतडी बलात्कार घटनाका दोषीले पाए साढे ११ वर्षकाे कैद सजाय #आहा खबर# लकडाउनमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र बजार खाेल्न नदिइने #आहा खबर# सीमा समस्यामाथि त्रिविले सुरू गर्याे अनुसन्धान #आहा खबर# विदेशमा अलपत्र परेका पचासौं हजार फर्काउन यस्तो छ तयारी, ३३६ नेपालीलाई आजै स्वदेश ल्याइने #आहा खबर# अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावको संघारमा ओबामा सक्रिय, ट्रम्पको कडा आलोचना #आहा खबर# ‘अप्ठेरो परिस्थितिले संघीय शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि’ #आहा खबर# नेपालमा २६ सय नाघे कोरोना सङ्क्रमित, कहाँ कति थपिए ? #आहा खबर# जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी #आहा खबर# नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट १० औँ व्यक्तिको पनि मृत्यु #आहा खबर# जेठ महिना भित्रै संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने तयारी #आहा खबर#
मंगलवार, ३१ भाद्र २०७६,	आहाखबर	2.57K
काठमाडौं, ३१ भदाै ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने तयारी गरिरहेका बेला सरकार पक्षबाट भने बाध्यकारी मर्जरको विपक्षमा धारणा आएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार बाध्यकारी मर्जरको पक्षमा नरहेको भन्दै भारतमा जस्तो नेपालमा बैंक मर्जर गराउन नसकिने बताए । नेपालमा बाध्यकारी मर्जर गराउन संभवसमेत नरहेको उनकाे भनाइ छ।
नेपाल बैंकर्स संघले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको 'बैंकिङ समिट' मा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भारतमा किन सम्भव भइरहेको छ र नेपालमा किन सम्भव हुँदैन भन्ने तर्क पनि प्रस्तुत गरे।
'भारतीय अर्थमन्त्रीले मर्ज गरेर बैंकलाई ठूलो बनाउने भनेर भन्नु भयो। त्यहाँ सरकारी लगानीका बैंकहरु मर्ज गराउन खोजिएको हो' खतिवडाले भने, 'नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंकको संख्या धेरै छ। त्यसैले यहाँ बाध्यकारी मर्जरमा जान गाह्रो छ।'
भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले पञ्जाव नेशनल बैंक 'पिएनबी'सँग ओरियन्टल बैंक अफ कमर्स र युनाइटेड बैंक अफ इण्डिया मर्ज गर्ने घोषणा गरेकी छिन्। यसैगरी केनरा बैंकसँग सिन्डिकेट बैंक मर्ज हुने छ। युनियन बैंक अफ इण्डियासँग आन्ध्रा बैंक र कर्पोरेशन बैंक मर्ज हुने छ। इन्डियन बैंकसँग इलाहाबाद बैंक मर्ज हुनेछ।
नेपालमा पनि तीन वटा सरकारी लगानीका बैंक छन्। एउटामा पूर्ण लगानी सरकारको छ भने बाँकी दुई वटामा मूख्य लगानी छ। सरकारी बैंक मर्जरका बिषयमा भने खतिवडाले केही पनि बोलेनन्।उनले सरकारले पनि नेपालमा ठूला बैंकहरु हुन् भन्ने चाहेको बताउँदै त्यसका लागि वाध्यकारी नभइ प्रोत्साहनमूलक मर्जरको पक्षमा आफू रहेको बताए।
खतिवडाले चालु बर्षको बजेटमा बैंकहरुको संख्या घटाउने उल्लेख गरेका छन्। उनको बजेटलाई सफल पार्न राष्ट्र बैंकले चालु बर्षको मौद्रिक नीतिमा बाणिज्य बैंकहरु मर्ज हुँदा सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको छ। मौद्रिक नीतिपछि जारी भएका कतिपय निर्देशनहरुमा बैंकहरुलाई मर्जरमा जान बाध्य बनाउने व्यवस्थाहरु पनि गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकलाई संस्थाहरु घटाउनका लागि विश्व बैंकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष 'आइएमएफ' सम्मको साथ छ। मुद्रा कोषका निवर्तमान क्षेत्री प्रमुख आन्द्रेस डब्लु बौरले वित्तीय स्थायित्वका लागि मर्जरमा जानुपर्ने बताएका थिए। नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा उतारचढाव उच्च रहेकाले शक्तिशाली बैंक बनाउन मर्जरमा जान उनको सुझाब थियो।
क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किएपछि मृत्यु भएका सुर्खेतका युवककाे रिर्पाेट पोजिटिभ